नेपालमा सङ्क्रमण झन् व्यापक बन्दै, कोरोनामाथि विजय हासिल गरीसकेका जिल्लाबाटै आयो एस्तो दु:खद खबर !! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा सङ्क्रमण झन् व्यापक बन्दै, कोरोनामाथि विजय हासिल गरीसकेका जिल्लाबाटै आयो एस्तो दु:खद खबर !!
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकानुसार ८ साउनसम्म ६ जिल्ला कोरोनामुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पाँचथर, भोजपुर, संङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ कोरोना संक्रमणमुक्त जिल्ला बनेका हुन्।
मन्त्रालयले ७ साउनमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकानुसार माथिका ६ जिल्लासहित धनकुटा पनि कोरोनामुक्त थियो। तर गएको २४ घण्टाभित्र धनकुटामा पनि कोरोनाका नयाँ संक्रमित भेटिएपछि अहिले ६ जिल्लामात्र कारोना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। यसअघि ४ साउनमा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकानुसार धनकुटा, पाँचथर, भोजपुर, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला र हुम्लासहित ८ जिल्ला कोरोनामुक्त भएका थिए।
चार दिनको अन्तरमा ८ साउनमा कोरोनामुक्त हुने जिल्लाको संख्या ८ बाट ६ मा झरेको छ। बिहीवार सम्ममा मुलुकमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या ५३५८ छ। अहिलेसम्म कुल १८ हजार २४१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकोमा यीमध्ये १२८४० निको भइसकेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:- भखरै अमिताभ बच्चनले अस्पतालबाटै भारतीय मिडियालाई भने ‘फेक’ !!
कोरोना संक्रमण भएपछि बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन अहिले मुम्बई स्थित अस्पतालमा उपचाररत छन्। अमिताभ सँगै छोरा अभिषेक बच्चन बुहारी ऐश्वर्या राय र नातिनी आराध्या बच्चनको पनि उपचार नानाभाती अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
विगत १२ दिनदेखि अस्पतालमै रहेका अभिनेता बच्चन सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय छन्। बिहिबार अभिनेता बच्चनको पछिल्लो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भारतीय मिडियाले जनाएका थिए। अमिताभसँगै अभिषेक बच्चनको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको र साँझ डिस्चार्ज हुने समाचारमा जनाइएको थियो।
पछिल्लो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भारतीय मिडियामा समाचार आएपछि ट्विट गर्दै अभिनेता बच्चनले उक्त खबर गलत रहेको बताएका छन्। उक्त समाचार गलत, गैरजिम्मेवारपूर्ण र झुटो रहेको अभिनेता बच्चनले ट्विटरमा उल्लेख गरको छन्।